Ikhadi Lebhizinisi le-Wordle! | Martech Zone
NgoLwesine, July 31, 2008 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, i-2015 Douglas Karr
I-Wordle hit the blogosphere a umbhangqwana amasonto edlule futhi ama-blogger bekulokhu kubhuza! I-Wordle uhlelo lokusebenza lweJava oluguqula ifayela lakho le- ifu lethegi entweni enhle.
bengicabanga I-Wordle bekupholile, kepha hhayi ukuthi kufanelekile nge-blog.
Namuhla ngibonisene Abacijile. Omunye wabantu abaseseshini, ULinda Watts, anikeze ikhadi lakhe futhi ngaso leso sikhathi langifaka ukumamatheka ebusweni bami!
ULinda ubeneqoqo lonke lazo (kanye neminye imiklamo eyingqayizivele), isethi ngayinye igxile kumagama angukhiye ahlukile nemishwana, konke kunemininingwane yakhe yokuxhumana ngemuva! Yeka ukudala okumangalisayo! Ngicabanga ukuthi ukube bengingabafana bakwaWordle, bengizoqasha uLinda ngimbeke ophethe ukwahlukaniswa kwamakhadi ebhizinisi!
ULinda ubengumphathi weWebhu kule minyaka engu-9 edlule futhi udala ngendlela emangalisayo, unekhono futhi unentshiseko. Ngimhlekise ngokuba yi-geek - okokufaka kwakhe ekilasini kungezwe kakhulu.
Kungakho ngithanda ukufundisa ifayili le- Izixazululo zeBitWise Imicimbi ye-Sharpminds, ngifunda okuningi kubo bonke ababekhona ngize ngiphume nginomuzwa wokuthi ngifunde okuningi kunalokho engikufundisile.
ULinda manje ubheke phambili emsebenzini omusha njengeWebhu, iWeb 2.0, nePrinta Technology Coach. Ungahle uthande ukumnika ucingo ngemibono ethile yasekuqaleni! Ngifisa sengathi ngabe ngacabanga ngalo mbono lapho ngikhuluma ngawo ukukhetha amakhadi ebhizinisi kuleli viki! Angiqiniseki ukuthi uLinda ufuna umsebenzi wesikhathi esigcwele - kufanele ubuze ukuthi unethuba lomthengisi wewebhu ophumelelayo.
Tags: ikhadi lebhizinisitagifu lethegitags
Jul 31, 2008 ngo-10: 13 PM
Siyabonga ngale Doug. Ngibhale kabusha i-tweet yakho yoqobo ngoba ngiyithanda kakhulu. Ngidlalile noWordle amahora ambalwa emuva ngabuya namafu amathathu ahlukene engiwathumele odongeni lwami emsebenzini.
Manje, ngicabanga ukuthi kungahle kube khona ezinye izindlela eziningi ezipholile zokusebenzisa lezi.
Lapho sicabanga ngemidwebo - asijwayele ukubheka amandla wamagama njengesisekelo salokho okujwayele ukususelwa kusithombe.
Isithombe singabiza amagama ayinkulungwane kepha igama ifu lingabiza ngaphezu kwalokho ongakusho esikhaleni esincane sekhadi lebhizinisi!
Aug 1, 2008 ku-7: 46 AM
Kushiwo kahle, Lynn!
Aug 1, 2008 ku-8: 51 AM
Siyabonga ngokushiwo okuhle kubhulogi yanamuhla. Yeka indlela yokuqala usuku lwami!
Amakhadi ami wangempela ayelinde ebhokisini lami leposi lapho ngifika ekhaya izolo. Ngizokuthumelela isampula. Ngiyazi uzohlatshwa umxhwele yikhwalithi ye-Moo Printing.
Aug 1, 2008 ku-9: 12 AM
Futhi kwangathi ngingeza ukuthi ngisijabulele kangakanani iseshini izolo. Ungenze ngacabanga kabusha ngokusetshenziswa kwamabhulogi futhi ngizosebenza kokukodwa ngenxa yalokho.
Aug 1, 2008 ku-9: 36 AM
Ngiyabonga Linda! Kwakuyiqembu elikhulu labantu ababekhona - lokho okwenza kube lula njalo.
Aug 1, 2008 ngo-1: 09 PM
Kufanele umthande uLizwi. Kuyathakazelisa ukuthi ngenze isonto eledlule ukuthola indawo yami yezinsiza "zebhizinisi lebhizinisi" Ngiyalithanda iqiniso lokuthi ungashintsha isikimu sombala. Amatshe e-Wordle. Ungabona eyami lapha http://cardsfreebusiness.com/
Aug 1, 2008 ngo-1: 18 PM
Kungezwe lena eqoqweni lami
Aug 1, 2008 ngo-3: 38 PM
WOW, kuhle kangakanani !!! Ngijabule kakhulu